Khabar Break - खेल
Thursday 19th of October 2017, 5:48:55 am
पानामा विश्वकपमा छनौट हुँदा अमेरिका बाहिरियो
Wednesday 11th of October 2017, 08:49 AM
असोज २५ – पानामा आउँदो वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि छनौट भएको छ । उत्तर तथा मध्य अमेरिकी क्षेत्रको छनौट अन्तर्गत बुधबार बिहान भएको खेलमा कोस्टारिकालाई २–१ ले हराउँदै पानामाले रुस यात्रा पक्का गरेको हो । यसअघि नै छनौट भएको कोस्टारिकालाई हराउने क्रममा पानामाका लागि दुवै गोल रोमन टोरेसले गरे । उनले ५२ र ८८ औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् । कोस्टारिकाका लागि ३६ औं मिनेटमा भेनेगासले गोल गरेका थिए । पानामा विश्वकपमा पहिलोपटक छनौट भएको हो । यस्तै...
ब्राजिलसँग पराजित भएपछि चिलि विश्वकपबाट बाहिरियो
Wednesday 11th of October 2017, 08:45 AM
असोज २५ – दक्षिण अमेरिकी च्याम्पियन चिली आउँदो वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि छनौट हुन सकेन । दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको छनौट अन्तर्गत बुधबार बिहान भएको खेलमा ब्राजिलसँग ३–० ले पराजित भएसँगै कोपा अमेरिका विजेता चिलीको विश्वकप सपना टुटेको हो । चिलीलाई कम्तिमा प्ले–अफमा स्थान बनाउनका लागि एक गोल अन्तरको हार चाहिन्थ्यो । तर यसअघि नै विश्वकपमा स्थान बनाएको ब्राजिलसँग चिली निरिह बन्यो र तीन गोल अन्तरले पराजित भयो । पहिलो हाफमा गोल रहित...
समुह चरणमा तेश्रो हुँदै अर्जेन्टिना विश्वकपको लागि छनौट
Wednesday 11th of October 2017, 08:35 AM
असोज २५ – अर्जेन्टिना आउँदो वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि छनौट भएको छ । दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको छनौट अन्तर्गत बुधबार बिहान भएको इक्वेडरसँगको निकै महत्वपूर्ण खेलमा ३–१ को जित निकाल्दै अर्जेन्टिनाले विश्वकपमा स्थान पक्का गरेको हो । एक खेल बाँकी हुँदा छनौट नहुने खतरामा रहेको अर्जेन्टिना स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीको उत्कृष्ट प्रदर्शनको बलमा विश्वकपमा स्थान बनाउन सफल भएको हो ।अर्जेन्टिनाको जितमा तीनै गोल मेस्सीले गरे । पहिलो मिनेटमा...
विश्वकप छनोट : अर्जेन्टिनालाई लागि 'गर या मर'को स्थिति, मेस्सीले के गर्लान ?
Tuesday 10th of October 2017, 08:12 PM
एजेन्सी। अाउँदाे वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबल २०१८ को छनोट खेलहरु अन्तिम चरणमा पुगेको छन् । दक्षिण अमेरिकी छनोट खेल भने रोमाञ्चक मोडमा पुगेको छ। विश्व फुटबलको महारथी अर्जेन्टिना छनोट हुने वा नहुने चरणको संघारमा छ। वुधबार विहान दक्षिण अमेरिकी छनोट चरणका अन्तिम खेलहरु हुँदै छन्। ब्राजिल यसअघि नै विश्वकपका लागि छनोट भइसकेको छ भने, बाँकी तीन टोलीको छिनोफानो हुन बाँकी छ। अंक तालिकामा ब्राजिल ३८ अंकका साथ पहिलो स्थानमा छ भने उरुग्वे २८, चिली २६,...
बस्तुगत संघ स्तरीय फुटसल हुने
Tuesday 10th of October 2017, 04:33 PM
हेटौँडा,२४ असोज, मकवानपुर फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी संघले आगामी कार्तिक १८ गते बस्तुगत संघ स्तरीय फुटसल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध रहेका वस्तुगत संघहरुबीच भाईचारा सम्वन्ध स्थापना गर्न हरेक वर्ष निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने गरि फुटसल गर्न थालिएको कार्यक्रम संयोजक यम सिलवालले बताए । मंगलबार हेटौंडामा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सिलवालले यस पटक १६ टिमले सहभागिता रहने र टिम दर्ता कार्तिक ११ गते...
विश्वकप फुटबलमा छनौट हुन चिलीलाई के चाहिन्छ ?
Monday 9th of October 2017, 01:31 PM
हेटौँडा, २३ असोज, विश्वकप फुटबलको छनौट अन्तर्गत दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक बनेको छ । गएको बिहीबार भएको खेलमा पेरुसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि लियोनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना रुस विश्वकपका लागि छनौट नै नहुने खतरा देखिएको छ । तर यस्तै खतरामा छ, एलेक्स सान्चेजसहितका स्टार खेलाडी रहेको चिली पनि । चिलीले आफ्नो अन्तिम खेलमा अब विश्वकपका लागि छनौट भइसकेको ब्राजिलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । रुस यात्रा सोझै तय गर्नका लागि...
२८ वर्षपछि विश्वकपमा छानियो इजिप्ट
Monday 9th of October 2017, 01:15 PM
हेटौँडा, २३ असोज, अफ्रिकी राष्ट्र इजिप्ट २८ वर्षपछि अर्को साल हुने विश्वकप फुटबलका लागि छानिएको छ। आइतबार राति भएको छनौट खेलमा कंगोलाई २-१ ले हराएर इजिप्टले सन् १९९० पछि पहिलो पटक विश्वकपमा स्थान सुरक्षित बनाएको हो। समूह ‘ई’ को इजिप्टले अन्तिम खेल खेल्न बाँकी हुँदै रसियामा हुने विश्वकप-२०१८ मा लागि टिकट पाएको हो। इजिप्टको जितका लागि लिभरपुल क्लबबाट पनि खेल्ने मोहमद सलाहले खेलको ६३ औं पहिलो गोल गरेका थिए। ८८ औं मिनेटमा कंगोका अर्नोल्ड बाउकाले...
विश्वकप फुटबलका लागि पोल्याण्ड छानियो
Monday 9th of October 2017, 12:56 PM
हेटौँडा, २३ असोेज, मोन्टेनेग्रोलाई हराँउदै पोल्याण्ड अर्को वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि छानिएको छ । युरोपेली समुह ई को खेलमा आइतबार राती मोन्टेनेग्रोलाई ४-२ ले हराँउदै पोल्याण्ड विश्वकपमा छानिएको हो । यही समुहका अन्य खेलहरुमा डेनमार्क र रोमानिया तथा काजखस्तान र अर्मेनियाले १-१ गोलको बराबरी खेलेका छन् । यो समुहबाट डेनमार्क प्ले अफ्मा छानिएको छ । विश्वकप फसटबल छनौट अन्तर्गगत राती भएका अन्य खेलहरुमा इंग्लण्ड, जर्मनी, पोल्याण्ड, नर्वे र...
मकवानपुर जिल्ला लिग तिहार अघि नहुने
Monday 9th of October 2017, 09:51 AM
हेटौँडा, २३ असोज, विवादका कारण स्थगित भएको मकवानपुर जिल्ला लिग फुटबल प्रतियोगिता तिहार अघि नहुने भएको छ । क्वाटर फाईनलको खेलमा एफसी इन्टरनेट र वागमती गाउँपालिकाबिचको खेलमा हात हालाहलको अवस्था सृजना भएपछि स्थगित भएको लिग अब तिहार पछि मात्र हुने मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले जनाएको छ । विवाद भएपछि पत्रकार सम्मेलनको आयोजन गरि आयोजक मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले लिग दशै पछि गर्ने बताएको थियो । तर आयोजकले आफ्नै निर्णयलाई लत्याउँदै लिगलाई थप अनिश्चित...